‘नेपाल न त चौकीदारको सप्लायर हो, न त भारतको नोकर’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
चैत २, २०७५ शनिबार १४:६:४० | राजेश जाेशी
‘चौकीदार त नेपालबाट पनि मगाउन सकिन्छ’, यो वाक्यमा लुकेको गर्व र घमण्ड हेर्नुहोस् ।
आम आदमी पार्टीकी विधायक अल्का लाम्बाको यो ट्वीटमा लेखिएको ‘मगाउन सकिन्छ’ लाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् । यसबाट यो अर्थ निस्कन्छ, हामी मालिक हौँ । हामीसँग अथाह पैसा र शक्ति छ कि हामीले जे चाह्यौँ त्यही मगाउन सक्छौँ । नेपालबाट चौकीदारबाहेक अरु के नै मगाउन सक्छौँ र ?
साँझपख भट्टीमा बसेर बेतुकका गफ हाँक्ने जँड्याहाहरु पनि यस्तै कुरा गर्छन्, ‘अरे, हामी जति पनि रक्सी मगाउन सक्छौँ । हामीलाई के कुराको कमी छ र ?’
अल्का लाम्बालाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति टिप्पणी गरेको नेपालका नागरिक रिसाउँछन् भन्ने पत्तै पाएनन् । उनले ट्विटरमा मोदीलाई कटाक्ष गर्दै लेखेकी छिन्, ‘प्रिय, भारतवासी, यो पटक प्रधानमन्त्री नै चुन्नुहोला । चौकीदार त नेपालबाट पनि मगाउन सकिन्छ । नेपालका चौकीदार चोर हुँदैनन् ।’
अल्का लाम्बा पढे लेखेकी सांसद हुन् । उनी दिल्ली विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघकी अध्यक्षसमेत भैसकेकी छिन् । यदि सुझबुझ हुँदो हो त उनले यो बुझ्नु पर्ने हो कि नेपालमा केवल चौकीदार मात्र हुँदैनन् । नेपालमा आईटी प्रोफेसनल, अर्थशास्त्री वैज्ञानिक, एक्टर, ब्यूटी क्वीन्स, संगीतकार आदि पनि हुन्छन् । हो, त्यहाँ चौकीदार, सफाइ कर्मचारी, मजदुर, किसान पनि हुन्छन्, ती त हाम्रै दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक र केरलमा पनि त छन् ।
अल्का लाम्बाको बयान पनि डोनाल्ड ट्रम्पकै बयानजस्तो छ, जतिसक्दो केही भारतीय मगाऔँ, न्यूयोर्क शहर दुर्गन्धित भैरहेको छ ।
नेपाललाई आफ्नो आज्ञाकारी ठान्ने अल्का लाम्बा एक्ली भने होइनन् । उनले गल्ती महसुस गर्दै ट्वीट त हटाइन् । तर यसले नेपाललाई आफ्नो गुलाम तथा आज्ञाकारी ठान्ने भारतको मानसिकता भने हट्दैन ।
नेपाली नागरिकलाई यो राम्रोसँग थाहा छ कि उत्तर भारतमा नेपाललाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्ने धेरै मानिस छन् ।
गएको महिना म काठमाण्डौबाट दिल्ली आइरहँदा एयर इन्डियाको फ्लाइटमा मसँगै बसेका भारतीय यात्रीले जब बियर मागे, फ्लाइट अटेन्डेन्टले प्लास्टिक मुस्कानका साथ जवाफ फर्काइन्, ‘सर, यो डोमेस्टिक फ्लाइट हो, यसमा हामीले बियर सर्भ गर्दैनौँ ।’
म ती फ्लाइट अटेन्डेन्टसँग सोध्न चाहन्थेँ कि कहिलेबाट नेपाल जाने फ्लाइट डोमेस्टिक अर्थात घरेलु उडान भयो ? कहिलेबाट नेपाललाई आफ्नो भारतमा समावेश गर्यौ, ड्यूड ?
कैयौँ नेपाली नागरिक आफ्नो कार र मोटरसाइकलमा चाबी लगाएर साइकल किन्न बाध्य भएका थिए । नेपालमा भारतले लगाएको यो पहिलो नाकाबन्दी भने होइन । राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
काठमाण्डौबाट केही टाढा रहेको चित्लाङबाट आफ्ना विद्यार्थीसहित पोखरा आएका एक शिक्षकले मलाई सोधे, ‘नाकाबन्दी गरेर के मोदीले बुझिबुझी हामीलाई चीनतर्फ त धकेलिरहेका छैनन् ?’ यसको म के जवाफ दिन्थेँ ।
-बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित बीबीसी हिन्दी रेडियोका सम्पादक राजेश जोशीको ब्लगको भावानूवाद ।
जाेशी बीबीसी हिन्दी रेडियाेका सम्पादक हुन् ।